Isaga oo ka hadlaya Seminaarka Dhulgariirka, İmamoğlu waa Mashruuca Dhimashada ee Channel Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIsaga oo ka hadlaya Seminaarka Dhulgariirka, İmamoğlu waa Mashruuca Dilka Channel ee Istanbul
Isagoo ka hadlaaya Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka Magaalada Istanbul, Duqa Magaalada Istanbul Ekrit İmamoğlu waxaa loo xilsaaray mashruuca "Channel Istanbul". Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Canal Istanbul kaliya ahayn mashruuca gaadiidka badda, ayuu Imamoglu tilmaamay in mashruucan uu ku jiro khataro wax ka beddeli kara nidaamka dheelitirka deegaanka ee dhulka iyo badda labadaba.
Harooyinka, barkadaha, meelaha beeraha, bey'ada, nidaamka biyaha dhulka iyo nidaamka gadiidka magaalada oo dhami waxay si weyn u saameeyeen mashruuca. Marka laga reebo burburka dhul beereed, jasiiradda waxaa laga sameyn doonaa inta udhaxeysa Strait of Istanbul iyo kanaalka cusub ee la furayo, xaalad xabsi oo ah tirada dadka ku nool 8 milyan ayaa soo if baxday. Iyadoo mashruucan qulqulaya, 8 milyan ayaa lagu xiri doonaa aagga halista dhulgariirka ee dalka. ” İmamoğlu wuxuu tilmaamay in xarumo badan oo soo jiidasho, magaalooyin, warshado, iskuulo iyo shaqooyin lagu abuuri karo lacag lagu isticmaali doono Kanal İstanbul oo uu yiri, waa arin kale oo ah in malaayiin muwaadiniin ah oo ku sugan xadka gaajada laga shaqaaleysan karo magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda. Marka la soo koobo, mashruucan xitaa mashruuc khiyaano ah uma uusan gelin Istanbul. Waa mashruuc dil ah. Waa mashruuc musiibo aan loo baahnayn oo loogu talagalay Istanbul. Markuu mashruucu dhamaado, Istanbul ayaa la dhamayn doonaa ..
“Aqoon-isweydaarsiga Dhulgariirka ğı, ee wax ka qabta arrinta dhulgariirka, oo ah masiibada ugu weyn ee ka dhacday Istanbul horteeda, wuxuu ka bilaabmay Xarunta Kongareeska ee Istanbul. Tayfun Kahraman, Madaxa Waaxda Maareynta Khatarta Dhulgariirka iyo Hagaajinta Magaalooyinka, Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM) ayaa khudbaddii ugu horreysay ka jeedisay aqoon isweydaarsiga oo la qaban doono inta u dhexeysa Disembar 2-3 Diseembar. Kadib markii ay qaateen makarafoonka, Kahraman, Madaxweynaha IMM-da Ekrem Imamoglu, Istanbul, sababa la xiriira degsiimooyinka ay saameysay mid ka mid ah khadadka khaldan ee khatarta dhulgariirka ayaa lagu sameeyay walaaca. Aqoon isweydaarsigan, İmamoğlu wuxuu sheegay inay isugu yimaadeen inay khariidad waddo cad ka sameeyaan magaalada. Imamoglu wuxuu sheegay in waagii hore, waxyaabo aysan ka shaqeynin gabi ahaanba magaalada Istanbul ama in aysan u shaqeyn sidii loo rabay, elbette, dabcan, waxaa jira sababa kala duwan oo waxyaabaha ay u joojiyaan ama u istaagaan. Laakiin sababta ugu muhiimsan ee aan ahayn 'Anaga' laakiin 'Aniga' waa qaabka loo maareeyo "Waan ogahay" qaabku waa is-fahamka codka iyo rabitaanka umadda. Sidaa darteed, laga soo bilaabo maalintii aan u nimid maamulka, waxaan u dejinnay maamul abaabulaya maskaxda guud. Waxaan bilownay inaan sameyno aqoon-isweydaarsi ku saabsan dhinac kasta oo nolosha ah iyo baahi kasta oo ka jirta Istanbul. Waxaan isu keenay dadka ay khusayso, khubarada, la-hawlgalayaasha iyo ka-faa'iideystayaasha. ”
EN WAA MUHIIMKA MUHIIMADA SHAQADA EE WAA INAY CAAWINAAN Maanta ”
Imamoglu wuxuu yidhi magaaladu waa inaysan noqonin aag jigsaw, sidaa darteed, kaqaybgalka dimuqraadiyadda, maskaxda iyo sayniska, waxay ku nuuxnuuxsadeen inay hanuuniyeen. İmamoğlu wuxuu tilmaamay muhiimada xaflada isaga oo leh ereyada “Waxa ugu muhiimsan ee aqoon isweydaarsiga aan ilaa hada qabanay ,,, birincil waajibka koowaad ee maamulka degmada iyo duqa waa in la sugo amniga nolosha iyo hantida muwaadin kasta oo ku nool magaaladaas. Markaa marka hore waad awoodi kartaa, markaa alaabada. Baahiyaha, mashaariicda iyo adeegyo dhammaan aaggaga kale oo keliya ayaa soo bixi kara ka dib. Dhanka kale, waxaa jira meela badan oo ah waxa aad ka qabato meelahan, inta dadaal ama waxa aad gaartid badanaa ma cadda. Aad aan loo aqoon. Aad bey muhiim utahay. Runtii, Suuragal maahan in la isku xidho shaqada, waqtiga iyo kheyraadka aad kubixin doontid aagaggaas. Dhul gariirka iyo aagga u diyaarsanaanta aafadu sidoo kale waa mid ka mid ah aagaggaas. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay sababta ay siyaasiyiintu, gaar ahaan siyaasiyiinta muusiga u ah, aysan fiiro gaar ah ugu yeelan arimahan. Just arrinta kululaaneysa iyo carbon dioxide caalamka qiiqa sida ay Qoomaan odhan. Ma nihin siyaasiyiinta noocaas ah, ayuu yidhi. Isagoo tixraacaya shaqadooda dhulgariir intii lagu gudajiray Duqa Magaalada Beylikdüzü İmamoğlu, ayaa yiri:
PR AARTHQUAKE WAA HALIS MUHIIM U AH EE MAGAALADAani ”
Madaxdeena ciid kama saari karno. Waxaan ka qaniina. Khatarta ugu weyn ee magaaladan waa dhulgariir. Khatartuna ma ahan khatar yar. Intaa waxaa sii dheer, halistu maaha kaliya halista Istanbul. khatarta All Turkiga. Waxaan ka hadlaynaa suuragalnimada fowdo weyn iyo musiibo qaran oo noloshu istaagi doonto oo dhaqaaluhuna uu ku dhici doono burbur weyn. Waxaan ka hadlaynaa qatarta weyn ee soo food saartay qaabdhismeedka 1.2 milyan ee hadda jira. Waxaan ka hadlaynaa khatarta ah in dhismooyinka 48 kun ay si xun u dhaawici doonaan tobanaan kun oo muwaadiniin ahna way dhiman doonaan. Sidaa darteed, maareyn cusub, hadafkeenna koowaad wuxuu yahay inaan ka dhigno magaalada Istanbul magaalo u adkeysta masiibooyinka iyo gaar ahaan dhulgariirrada. Hadafkayaga ugu macquulsan ayaa ah inaan soo saarno qorshe-hawleed annagoo tixgelin siinayna dhammaan soojeedimaha xallinta sayniska ee heer caalami iyo heer qaran. Waxaan rabnaa inaan helno qaab ku saleysan macluumaadka sayniska isla markaana aan tixgelinno aragtida dhammaan daneeyayaasha ay quseyso oo aan tallaabo qaadno. ”
Imamoglu wuxuu ogaaday in Istanbul waqti badan ku lumisay dhulgariirrada oo wuxuu yiri, nasıl Sidee bey bulshada halista weyn ugu jirtaa in la iska indhatiro? Waxba kama qabo. ” Isagoo caddeeyay inaysan dooneynin inay waqti lumiyaan, ayuu yidhi ,mamoğlu, hepsi Dhammaan jaamacadaha, machadyada, ururada aan dowliga ahayn, xarumaha dowladda iyo kuwa maxalliga ah; kartida, tababarka iyo khibradda. Qof kasta waa inuu ku lug lahaadaa dhammaan howlaha ka hortagga iyo dhaqancelinta. Sababta oo ah waa abaabulid. ”
SA HADDII AAD HESHIIS UU KA QAYB GALATO, SIDEE AYU UGU SHAQEEYAA?
In kasta oo ay jirto arin gubasho ah sida dhulgariir, İmamoğlu wuxuu dhaleeceeyay mashruuca "Channel Istanbul" wuxuuna intaa raaciyay, waxaan rabaa in aan weydiiyo dhamaan dadka reer Istanbul: Haddii aad leedahay miisaaniyad xaddidan, sidee ku kharash gareeyn lahayd miisaaniyaddaas? Haddii aad dhib ku qabtid helitaanka cuntada si aad ugu quudiso xubnaha qoyskaaga. Haddii aadan haysan dakhli kugu filan oo aad ku quudiso oo aad ubadkaaga wax ku barato hab wanaagsan oo caafimaad qaba. Miyaad deyn u geli laheyd si aad u soo iibsato alaab guri oo aan lagamamaarmaan oo raaxo leh ama ma ka amaahan doontaa bangiga oo aad fasax u aadi doontaa? Qoys ahaan, aabe, hooyo, maxaad ka walwalsan tahay markaad qorsheyneyso inaad ku kharash gareeyso miisaaniyadaada? Haddii aad tahay ganacsade, ganacsade, ganacsade, sidee baad u dhaqmeysaa? Sida ganacsatada xariifka ah, ganacsatada ama ganacsatada caqliga leh, miyaad ku iibsaneysaa yachts garaacyadooda? Mise waxaad dooneysaa inaad sameyso maalgashi xaqiijin doona jiritaanka shirkaddaada ”. Isagoo sheegay in jawaabaha su'aalahan ay hubaal yihiin, thesemamoğlu ayaa yiri:
Miyay mudan tahay in mustaqbalkeennu noqdo CHANNEL ISTANBUL? ”
Sorumlu Waalid masuul ah oo leh miisaaniyad xaddidan ayaa u maleynaya dadka ganacsatada masuulka ka ah toban jeer ka hor intaadan isticmaalin qalin kasta. Buttermilk uma dhaqmo sida waxa loo yaqaan nooca bini-aadamka oo bilowda cabitaanka. Laakiin sidee ayay tahay in maamul dowladeed oo caqli badan, siyaasad xariif ah, uu qorsheeyo inuu ku kharash gareeyo miisaaniyadda guud? Miyaanay mudnaan ahayn in la wanaajiyo tayada nolosha ee qaranka, shaqada, wax soo saarka, waxbarashada iyo caafimaadka? Ma ku bixin doontaa kheyraadka ummadda riyo ceyn ah? Waxaa magaalada ka jiray hadalo ku saabsan mashruuc Channel Channel ah oo magaaladan laga qabtay muddo. Weligood miyay na weydiin? Ma heleen fikirkeena? Boqolaal kun oo dhalinyaro ah, dhalinyaro, 4 milyan oo hibo leh ayaa ah shaqo la’aan iyo rajo la’aan. Markay dadkani oo dhami faqiir yihiin. Iyada oo dhammaan wax soo saar loo baahan yahay. Markay jirto baahi loo qabo in la dhiso warshado badan. 16 milyan oo qof oo magaaladan, ku filan in ay ku quudiyaan liidata carruurtu ay mustaqbalka sidan magaaladan weyn. In kasta oo qaybta culeysku aysan heli karin waxbarashada dugsiga ka hor. Markii aan wax ku baraneyno fasallo badan oo buuq leh, muhiimadeena ma noqon kartaa Kanal İstanbul? ”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Canal Istanbul kaliya ahayn mashruuca gaadiidka badda, ayuu Imamoglu tilmaamay in mashruucan uu ku jiro khataro wax ka beddeli kara nidaamka dheelitirka deegaanka ee dhulka iyo badda labadaba. İmamoğlu khudbadiisa ayuu ku sheegay khataraha soosocda:
Proj Mashruuca waxaa si ba'an u saameeyay harooyinka, barkadaha, meelaha beeraha, degaanada, nidaamka biyaha dhulka iyo nidaamka gadiidka magaalada oo dhan. Marka laga reebo burburka dhul beereed, jasiiradda waxaa laga sameyn doonaa inta udhaxeysa Strait of Istanbul iyo kanaalka cusub ee la furayo, xaalad xabsi oo ah tirada dadka ku nool 8 milyan ayaa soo if baxday. Iyadoo mashruucan qulqulka leh, 8 milyan ayaa lagu xiri doonaa aagga khatarta ugu weyn ee dhulgariir. Ma jiro dowlad adduunka ka jirta oo u soo wareejin doonta dad sidan u tiro badan juqraafi kale inta lagu jiro dhulgariir. Waa maxay mashruuca noocan ah Eebbe aawadiis? Waa maxay sababta? Fiiri, kanaalka mashruucu wuxuu dhererkiisu yahay kiiloo mitir 45, dhererkiisuna yahay 20,75 mitir iyo midka ugu cidhiidhsan mitirka 275. Kanaal maraya Sazlıdere iyo Terkoz Basins. Si kale haddii loo dhigo, mashruucu wuxuu baabi'inayaa Sazlıbosna iyo Terkoz Basin Areas. Waxay xambaartaa khatarta biyaha dhulka hoostiisa iyo cusbada cusbada Terkoz Lake. biyo la cabbo oo Istanbul ee si cad loo fahmo sameeyay khatar ku amaanaa inay baahidaada. Tani waxay keligeed waa xaq a filan dhismaha mashruuca this! Dadka reer Istanbul ma cabi doonaan biyaha badda? Dhanka kale, mashruucu wuxuu gobolka u keeni doonaa 1,1 milyan oo dad cusub ah. Sababtoo ah mashruucan 6 milyan oo safarro cusub ayaa dhici doona. Gaadiidka Magaalada Istanbul ayaa kordhi doona ugu yaraan boqolkiiba 5. 3.4 milyan oo mitir murabac laba jibbaaran, 10 milyan oo mitir murabac ah ayaa la baabi'in doonaa. Ma jiri doono Dambi Sazlıdere. Hawlaha Hawleed ee Dawladdu (DSI) sidaa darteed warbixin xun ayuu siiyay mashruuca. Sida lagu sheegay warbixinta, 23 ee barkadaha biyaha ee buuxiya baahiyaha biyaha waa la baabi'in doonaa. Iyadoo la adeegsanayo dhismaha kanaalka ayaa noqon doona qoditaan weyn. Marka loo eego warbixinta TMMOB, 136 waxay lahaan doontaa bilyan mitir cubic oo qoditaan ah. 29 kun kabxidda gaadiidka gaari xamuul ah maalin kasta si Istanbul in ay dhigtaan. Ma cadda halka ay ku qodmi ​​doonan. Dhaca, tusaale ahaan; Haddii Güngören-Esenler-Bağcılar uu ku daato degmooyinkaas, Degmooyinkani waxay sare u kici doonaan qiyaastii 2.1 mitir. ”
“FADLAN AYUU KA FILAN YAHAY KHUDBADAHA BASPHORUS ISTANBUL!”
1., 2., Iyo 3. shahaado aag dhulgariir ah oo muujinaya in Imamoglu, “kiiloomitir 11 kiiloomitir Waqooyiga Anatolian, kiiloomitir xNUMX kiiloomitir Ciarcik dhaafa. Saynisyahanada ayaa sheegaya in Mashruuca Channel Istanbul uu carqaladeyn doono isku dheelitirka culeyska dhulka iyo dhulka, iyo culeyska xad dhaafka ah wuxuu casuumi doonaa dhulgariirro cusub. Dhawrista dharka taariikhiga ah ee Bosphorus waxaa lagu tilmaamaa sababta mashruuca. Si kastaba ha noqotee, mashruuca, 30 wuxuu saameeyaa aagga SIT ee miti mitir laba jibaaran. Magaalada Bathenoa Ancient City ee ku taal xeebta Küçükçekmece Lake iyo Yarımburgaz Caves oo ah mid ka mid ah degsiimooyinka ugu horreeya ayaa ku yaal aagga mashruuca. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jiito dareenkaaga taraafikada Bosaso. Sida lagu sheegay faylka dalabka EIA, taraafikada Bosphorus ma ahan koror marka loo eego sanadihii, laakiin taa bedelkeeda, gaar ahaan sanadkii 17 ee la soo dhaafay, hoos u dhac boqolkiiba 10 ah ayaa la arkay. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in dayacaad la'aanta aysan ku koobnaan doonin oo keliya Istanbul, İmamoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay in Badda Marmara iyo Gobolka ay iyaguna qatar weyn ku yihiin:
“Beeraha aadka u wanaagsan ee beero iyo kaynta oo dhererkoodu yahay 45 kiiloomitir dherer ahaan iyo celcelis ahaan dhererkoodu yahay 150 mitir waa laga baabi'in doonaa weligood. Maadaama Jasiiradda Istanbul ay ka tagi doonto Thrace, buundooyin cusub oo isku xira ayaa loo baahan doonaa. Sababta oo ah isku-darka labada dhinac ee Badda Madoow ilaa Badda Marmara, Badda Marmara si daran ayaa loo wasakhayn doonaa. Xaaladdaani waxay halis gelineysaa nolosha nololeed ee Badda Marmara iyo sidoo kale kalluumeysiga iyo dadka ku nool ganacsigan. Kanaalka ayaa waliba sababi doona isbeddelo cimilo. Iyada oo ay weheliso dhulkii burburay, duurjoogta ayaa halkaas lagu baabi'in doonaa. ”
“MARKA MASHRUUCADUUUU DHAMMEYSO, HADDII LAGU QAADO
İmamoğlu wuxuu tilmaamay in xarumo badan oo soo jiidasho, magaalooyin, warshado, iskuulo iyo shaqooyin lagu abuuri karo lacag lagu isticmaali doono Kanal İstanbul oo uu yiri, waa arin kale oo ah in malaayiin muwaadiniin ah oo ku sugan xadka gaajada laga shaqaaleysan karo magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda. Marka la soo koobo, mashruucan xitaa mashruuc khiyaano ah uma uusan gelin Istanbul. Waa mashruuc dil ah. Waa mashruuc musiibo aan loo baahnayn oo loogu talagalay Istanbul. Marka mashruucan la dhammeeyo, waa la dhamayn doonaa Istanbul. Magaaladan cajiibka ah waxay noqon doontaa magaalo aan deganeyn. Hawo nadiif ah, kaabayaasha biyaha ayaa keligood looga tegi doonaa dhibaatooyinka aan lagu xallin karin taraafikada. Isgoysha Bosaso iyo isgoyska taraafikada midkoodna dhaqaale ahaan looma baahna. Waxaa loo diyaariyey oo keliya abuurista goobo cusub oo kiro ah, natiijooyinkeeda burburka ahna weligood lama tixgelin. Ma oggolaan karno mana oggolaan karno baabi'inta jawiga dabiiciga ah, degaannada iyo barkadaha biyaha ee magaaladan qadiimka ah haddii ay dhacdo in qof lacag sameeyo. Waxaan ka hortegi doonaa qaladaadka khibradaada, xasaasigaaga iyo geesinimadaada.
Maskaxdaada guud, waxaan ka dhigi doonnaa magaaladeena amni, badbaado iyo soo jiidasho badan 16 milyan. Waad mahadsantahay, joog meesha ”.
Kaqeybgalayaasha takhasuska leh, 2-3 ayaa la qaban doonaa inta u dhexeysa Disember si ay u fariistaan, mowduuca dhulgariirka ka dhacay Istanbul ayaa maalgashi sameyn doona.
Goorma ayuu bilaabmayaa wadada Channel Istanbul?